रमेश प्रसाईका साथी जीवन विष्टको आँखाको शल्यक्रिया डा. सन्दुक रुइतले गर्दै, यस्तो लेखे उनका भाईले सामाजिक सञ्जालमा – Tufan Media News
रमेश प्रसाईका साथी जीवन विष्टको आँखाको शल्यक्रिया डा. सन्दुक रुइतले गर्दै, यस्तो लेखे उनका भाईले सामाजिक सञ्जालमा
१७ पुष २०७७, शुक्रबार १०:४८
धरानका प्रखर पत्रकार तथा रमेश रमेश प्रसाईका निकटका मित्र जीवन विस्टको विगत केही समय अघि देखि आँखा मा समस्या भएदेखी उनी अहिले आँखा को शल्यक्रिया गर्न तिलगंगा अस्पतालमा पुगेका छ्न । प्रख्यात डाक्टर सन्दुक रुइतसंग अहिले जीवन विस्टको शल्यक्रिया भइरहेको छ ।
त्यस्तै केही दिन अगाडि प्रखर वक्ता रमेश प्रसाइकी श्रीमती नन्दाले पनि आफ्नो आँखाको उपचार छिट्टी गर्ने बताएकी थिइन । भर्खरै मात्र विवाह बन्धनमा बाँधिएकि नन्दाले काठमाडौ आइसकेपछी एक युटुब च्यानलमा सो कुरा खुलासा गरेकी हुन । तपाइँको आँखाको उपचारको लागि के सोच्नुभएको छ भन्ने प्रश्नमा नन्दा भन्छिन :- मेरो आँखा बन्छ कि बन्दैन थाहा छैन तर पनि अब म केही दिनमै वरिष्ठ डा. सन्दुक रुइत संग परामर्श लिन उहाँलाइ भेट्न जाँदै छु । नेपालमा नभएर विदेश मा हुने भयो भने म जान सक्दिन किनकी मेरो त्यँहा सम्म जाने हैसियत छैन । भरिसक नेपालमै भैदिएको भए सहज हुन्थ्यो; म भन्दा पनि मेरा यी बालबच्चा लाई हुर्काउन अझ बढी सहज हुन्थ्यो भन्ने उनको उनको भनाई थियो ।